११ कक्षाको नतिजामा चरम लापरबाही ! पोखरामा विद्यार्थीको रुवाबासी ! (भिडियो सहित) - Enepalese.com
११ कक्षाको नतिजामा चरम लापरबाही ! पोखरामा विद्यार्थीको रुवाबासी ! (भिडियो सहित)
इनेप्लिज २०७५ असोज २३ गते २३:५२ मा प्रकाशित
पोखरा । पोखरा आसपासका विद्यालयहरुका विद्यार्थीको नतिजा गलत आएको र राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले चरम लापरबाही गरेको भन्दै राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको पोखरास्थित कार्यालयमा प्रर्दशन सहित विरोध गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले आफुहरुले परिक्षामा राम्रो गरेपनि बोर्डको लापरबाहीका कारण नतिजा अप्रत्याशित आएको जनाएका छन् ।
उनिहरुले आफुहरुको उत्तरपुस्तिका पुनः परिक्षणको माग गरेका छन् । उनिहरुले आफ्नो माग पुरा गर्न २ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । विद्यार्थीहरुले बोर्डले विद्यार्थीको भविश्यमाथि खेलवाड गरेको, मानशिक तनाव दिएकोले यसको क्षतिपुर्तीको माग पनि गरेका छन् । यो भिडियो हेर्नुहोस ।